Ady amin’ny kolikoly : Mitaky ny fahatongavan-tsainan’ny tsirairay -
AccueilRaharaham-pirenenaAdy amin’ny kolikoly : Mitaky ny fahatongavan-tsainan’ny tsirairay
10/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Laharana faha-145 amin’ny firenena 176 no misy an’i Madagasikara eo amin’ny resaka kolikoly, araka ny tatitry ny « Transparency International » tamin’ny taona 2016. Araka izany, dia fanetriben’ny firenena, ary misakana amin’ny fivoarana sy ny fampandrosoana ny firenena io lafiny io. Amin’ny ankapobeny dia ahitana taratra izay fanaovana kolikoly izay ny isan’ambaratongany miainga eny anivon’ny fokontany ka hatrany anaty biraom-panjakana, any amin’ny kaominina, hatreny amin’ny arabe… Voakasik’izany ihany koa ny lafiny rehetra, ka anisan’ireny ny resaka ady tany, ireo fikarakarana taratasy samihafa ilaina amin’ny fiainana andavanandro, ny fanaovana kara-panondro, taratasy ho an’ny fisotroan-dronono, ny fividianana naoty amin’ny fanadinana, hatramin’ny fisavana ireo antotan-taratasy momba ny fiarakodia… Nandritra ny tafa nifanaovany tao anatin’ny fotoam-bita, dia nanamarika ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa « Marobe ny endriky ny kolikoly ataon’ny olom-pirenena… Manamafy ny finiavana izay hananako handrava tanteraka izany fanetriben’ny firenena izany aho, ary manome toky ny malagasy rehetra fa tena miady amin’izany tsy hanavahana na an’iza na iza ». Nanantena ihany koa anefa izy fa andraikitry ny tsirairay ny ady amin’izany kolikoly izany, ary manao antso ny vahoaka izy hitovy fijery aminy amin’io ady io. « ady lehibe tsy mila fiadiana io fa ny faharesen-dahatry ny tsirairay » hoy hatrany ny fanazavany. «Atomboy amin’ny tenanao ny fahatongavan-tsaina. Tsy misy ny mandray raha tsy misy ny manome. Aza raisinao bitika ny kolikoly omenao, ka ny kolikoly avo lenta ihany no malaza amin’ny haino aman-jery. Faizin’ny làlana izany, ary mandray anjara amin’ny fanapotehana ny firenena ianao, ary misakana amin’ny fampandrosoana », araka ny fanentanana nataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Sehatra iray lehibe hanampy ny fahavononan’ny tsirairay hiady amin’ny kolikoly ny fametrahana ireo rafitra samihafa entiny miady amin’io fanetriben’ny firenena io. Ankoatra ny fametrahana ny sampandraharaha mahaleo tena miady amin’ny kolikoly, dia apetraka ihany koa ny laharana maitso ahafahan’ny olom-pirenena tsirairay tonga saina sy mandray andraikitra hilazana ny tranga kolikoly misy. « Ady lehibe no atrehina, ka ho tratra ny tanjona raha ny olom-pirenena tsirairay no mahatsapa fa ampy izay, ary tokony hiray saina ny malagasy rehetra ho olom-pirenena tompon’andraikitra, ka ho fadiana ny manome kolikoly. Azo atao ny mitoroka ary arovan’ny lalàna, raiso ny adidy, raiso ny andraikitra », hoy hatrany ny Filoha nanao ny fanentanana. Ankoatra io laharana maitso io, dia nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny fisian’ireo tetikasa samihafa, ka anisan’izany ny « Tsy Cool Koly », hiarahana amin’ireo mpamatsy vola sy ny fiarahamonim-pirenena.